Ahoana ny fomba hitondrana orinasa miaraka amin'ny Twitter sy sioka nampiroborobo | Martech Zone
Manolotra a izao ny Twitter karazana fampielezan-kevitra hanangana manaraka, handroaka ny fifamoivoizana sy ny fanovana any amin'ny tranokalanao, hametraka rindranasa, hahazo fitarihana, na hampiroborobo ireo bitsika manokana.
Tweet nampiroborobo manohy mipoitra ao amin'ny fandaharam-potoanako ao amin'ny Twitter sy amin'ireo fampiharana Twitter zanatany. Tokony hitrandraka ny orinasanao Ny fomba fanao tsara indrindra ao amin'ny Twitter, fa raha mandoa vola tokoa ianao hampiroboroboana ny sioka, misy zavatra manokana azonao atao hanatsarana ny tahan'ny tsindry avy amin'ireo sioka naely.
Araho ny @martech_zone
Ny interface for Tweet Promoted dia mamela ny mpampiasa hamaritra ny fampielezan-kevitr'izy ireo, mamaritra ny datin'ny fampiroboroboana Tweet ary misafidy ny mpihaino tianao hokendrena.
izany infographic avy amin'ny Social Samosa manome dingana fanatsarana manokana azonao raisina rehefa mampiroborobo ny sioka hampandrosoana ny fifamofoana. Ny bitsika fohy kokoa dia mirona amin'ny fampisehoana tsaratsara kokoa sy manampy tenifototra, miresaka, rohy, sary ary horonan-tsary dia mitondra fifandonana bebe kokoa. Manisy marika fiantsoana fotsiny ampitomboy amin'ny 43% ny fampiroboroboana Tweet nataonao!
Tags: fanamarihana marikany fomba hampiroboroboana ny bitsikaSary torohaysioka nandrosofanatsarana bitsikatoro-hevitra momba ny fampiroboroboana bitsikadoka amin'ny twittertwitter ho an'ny orinasatenifototra twittertwitter infographicrohy twittermiresaka twittersary twitterfampiroboroboana ny twitterhoronan-tsary twitter
Ny siansa mahagaga ao ambadiky ny fitaomana sy fandresen-dahatra